ခရီးစဉ် ~ စန္ဒကူး
မကူးရန်ကုန်ပြန်အကြောင်းလေးတွေ ဖတ်လို့ ကောင်းသား
ဗျ တော်တော်လေးပျော်ခဲ့ တယ် ထင်တယ် . . . အမရေး
တာလေးတွေဖတ်ပြီး လွမ်းသွားတယ်ဗျာ . . . တိုးတက်လာ
တာကတော့ ပေါက်တောက်ကရတွေဘဲ တိုးတက်နေတာ
ပါအမရာ ပြောရင်အောင်မင်းလွန်အုံးမယ်ပြောတော့ဘူး :D
ကဲ ပျော်ရွှင်သော နှစ်သစ်လေးဖြစ်ပါစေဗျာ :)
ကူးးးးးးးးးးးးးးးးးးစ်ရက်စက်ဒယ်
ကူကူး ဥဥ ၀င်ကြည့်သွားတယ် ပြန်ခါနီးဖုန်းဆက်လို့မရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဥဥအမှတ်တရလေးမပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါ
ပါရမီတက္ကစီ နှစ်ထောင်ခရီးကို ခြောက်ထောင်တောင်းတယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး.. :( အမြဲတမ်းစီးနေကျဟာကို... တခြားတက္ကစီတွေထက်အမြဲသက်သာတယ်...
မယုံမရှိနဲ့ anonymous ရေ..တစ်ကယ်ကိုတောင်းတာ. ပထမတစ်ခါ လေယဉ်ကွင်းမှာ... ဈေးသတ်မှတ်ထားတာ ထက်ကိုပိုတောင်းတာ.. မောင်လေးနဲ့တောင်စကားများမလိုဖြစ်တာ... သူတို့က အဲဒါအစိုးရသတ်မှတ်ထားတာ..သူတို့ကတော့အဲလောက်နဲ့ မလိုက်နိုင်ဘူးတဲ့...
နောက်တစ်ခါကတော့ ဂိတ်ကနေသွားစီးတာ ဘေလီအကျော်နာမှာ ပါရမီဂိတ်ရှိပါရောလား... အဲဒီကနေ ပုလဲကွန်ဒို နန်းထိုက်တော်ဝင်သွားဖို့ကို အလွန်ဆုံး ၂၀၀၀ ဆိုအခြား ကားတွေကပျော်ပျော်ကြီး လိုက်တယ်.. သွားနေကျကို..အဲဒါကို ၆၀၀၀ တောင်းတယ်..
ပေါက်စ် ရေ... တစ်ဟွတ်ဟွတ်ချောင်းတွေဆိုး..ကိုယ်တွေပူ...ဒီနှစ်တော့ ပြင်ဦးလွင်မရောက်ဖြစ်ဘူး..း(